နေအိမ် / Archives for Arbitration Jurisdiction
ဗင်နီဇွဲလားကနေသင်ခန်းစာ: ICSID ရဲ့ Post ကို-ကျြအဆင့်
01/12/2017 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
ဆန္ဒပြပွဲများ. သတင်းစာစောင်များ. စာချုပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့်ရုပ်သိမ်းရေးတောင်းဆိုမှုများ. အလားအလာ Post-ခုံသမာဓိအသက်နိုင်ငံရေးနှင့်စီးပွားရေးရာသီဥတု, အစိုးရများနှင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းဆွေးနွေးငြင်းခုံ၏အမူအရာတို့သည်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း၌ရှိကြ၏. ရှေ့ဆက် Going, သို့သော်, ဒါကြောင့်နှစ်ဦးကိုစီးရီးကွုံရသောအခါခေါင်းဆောင်များ Bolivarian ဗင်နီဇွဲလားသမ္မတနိုင်ငံနှင့်၎င်း၏မကြာသေးမီက ICSID debacle ကနေသင်ယူဖို့အောက်မေ့ပါလိမ့်မယ် […]
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်စီရင်ပိုင်ခွင့်, ICSID အနုညာတစီရင်, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်သုတေသန, UNCITRAL အနုညာတစီရင်, ဗင်နီဇွဲလားအနုညာတစီရင်
အဘယ်အရာကိုအထွေထွေ Jose Fernandez de Santillánချိတ်ဆက်, Emerald နှင့်ကိုလံဘီယာခုံသမာဓိတရားစွဲဆိုမှု? တဦးတည်းထင်လိမ့်မယ်ထက်ပို. မစ္စတာပါလျှင်. ဖာနန်ဒက်ဇက de Santillánအပေါ်ဗြိတိသျှအုပ်တစ်အုပ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့သော 8 ဇွန်လ 1708, ဘဏ်ဍာတိုကျကျယ်ပြန့်သောပမာဏသယ်ဆောင်တစ် galleon ၏ဒဏ္ဍာရီမွေးဖွားခဲ့ကြတာပါ. စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးမကြာသေးမီကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံသမာဓိတစ်ခုမှာမယ်လို့ […]
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်စီရင်ပိုင်ခွင့်, အနုညာတစီရင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, ကိုလံဘီယာအနုညာတစီရင်, စပိန်အနုညာတစီရင်